Thursday May 19, 2022 - 00:11:27 in Wararka by Super Admin
Berbera(Xogreeb.com)Shaqaale-weynaha Haayadda Dekedaha Jamhuuriyada Somaliland, oo u hor-kacaayo Maareeyaha guud ee Dekedaha Eng. Siciid Xasan Cabdilahi, ayaa Maanta Wacdaro ka dhigay Xuska qaran ee 18-ka may, 31-guurad kasoo wareegtay dib ula soo noqoshada xornimada Somaliland.
Shaqaale-weynaha Dekedaha, ayaa socod dheer kusoo wareegay Wadooyinka hal-bowlaha ee Magaalada Berbera, kadibna waxay si toos ah isaggu biyo-shuubteen fagaaraha beerta Xoriyadda Magaalada Berbera.
waxana halkaa hala hadashay bulshada Somaliland ee Maanta sida weyn ugu Dabaal-deggay Sannaad-guurada 31-aad, ee xornimada Somaliland, masuuliyiinta kala duwan, kuwasoo ka waramay muhiimada maalintani qaranka u leedahay.
masuuliyiinta halkaa bulshada Somaliland kala hadashay waxa kamid ahaa Maareeyaha Dekedaha JSL Eng Siciid Xasan Cabdilahi, waxanu si weyn ugu mahadceliyey Ciidamada Qaranka ee kala duwan, bulshada Saaxil, guud ahaan Somaliland iyo Shaqaale-weynaha Dekedaha, waxanu ilahay ka baryey inuu Somaliland siiyo aqoonsi buuxa, iyo qaranimo taam ah.
Intqa Kadib, Maareeyaha Dekedaha Jamhuuriyada Somaliland Eng Siciid Xasan Cabdilahi, iyo qaar kamid ah masuuliyiinta Dekeddu oo ay weheliyaan Ciidamada ilaalada Xeebaha Jamhuuriyada Somaliland, waxay xuska qaran ee 18-ka May ugu dabaal deggeen dhinaca Badda oo ay ka sameeyeen Dhoola-tus Balaadhan, iyagoo ay ka qayb-qaadanayeen Gaadiidka Haayadda Dekedaha, oo ay kamid yihiin Tagaga Casriga ah iyo Doomaha Bayloodada.